Qaramada Midoobay ayaa bogaadisay Seychelles - BBC Somali
Qaramada Midoobay ayaa bogaadisay Seychelles
Image caption Burcad-badeed xabsi loo wado
Qaramada Midoobay waxay sheegtay inay aqoonsatay doorka udub dhexaadka ah ee Seychelles ka qaadato la dagaallanka burcad-badeedka ee badweynta India iyo kaalinta horseednimo ee ay kaga jirto wada xaajoodyada burcad-badeedda Soomaalida ee la xukumay lagu wareejinayo xabsiyo ku yaalla Soomaaliya.
Kooxda xiriirka Soomaaliya ee qaabilsan burcad-badeedda xeebaha ka baxsan Soomaaliya oo ka kooban ilaa 60 waddan iyo ururro waxay ku shireen xarunta Qaramada Midoobay ee New York si ay uga wada xaajoodaan waxyaabihii ugu dambeeyay ee beesha caalamku ka qabatay kahortagga burcad-badeedda ka qaraabata badweynta India.
Isagoo ka hadlayay kulankii furitaanka, ku-xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee arrimaha siyaasadda, Fernandez Taranco, waxaa uu ugu horreyntii xusay wada xaajoodyo ay Seychelles la yeelatay maamulayaasha Soomaalida si loogu wareejiyo burcad-badeedda la xukumo inay xabsiyadooda ku dhammaystaan Soomaaliya taasoo uu sheegay inay tahay horumar weyn oo cusub oo laga gaaray wax ka qabadka dhibaatada burcad-badeedda.
Heshiiskan waxaa dhowaan kala saxiixday wasiirka arrimaha gudaha ee Seychelles Mr Joel Morgan iyo wakiillo ka socday dowladda ku-meel-gaarka ee Soomaaliya. Maamulayaasha Somaliland iyo Puntland ayaa sidoo kale saxiixay is-afgarad ah inay meel mariyaan heshiis noocaas oo kale ah.
Iyadoo taas la raacayo, Mr Morgan waxaa uu ku dhawaaqay in xabsiga ugu horreeya ee caynkaas ah dhowaan laga furi doono magaalada Hargeysa ee Somaliland, ayna munaasabadda furitaanka ka qayb geli doonaan wakiillo ka socda Seychelles. Maamulayaasha Seychelles waxay sheegeen in dhaqaalaha jasiiraddaas yar oo ku dhisan waxa badda uga yimaad ay dhibaato ka soo gaartay falalka burcad-badeedda.
Mas'uuliyiinta Seychelles waxay kaloo caddeeyeen inay taageerayaan tallaabo uu Maraykanku horseed ka yahay oo ah in dabagal lagu sameeyo lacagta malaayiinta dollar ah ee burcad-badeeddu madax furashada u qaadato si loo aqoonsado loona soo qabto dadka mas'uulka ka ah soo diridda, abaabulka iyo maalgelinta weerarrada burcad-badeedda.